‘लक्का जवान’ को प्रचारमा पूर्व आएका शिवहरी र किरण भन्छन् ‘भोट पनि हालाै फिल्म पनि हेराै’ - Purbeli News
‘लक्का जवान’ को प्रचारमा पूर्व आएका शिवहरी र किरण भन्छन् ‘भोट पनि हालाै फिल्म पनि हेराै’
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख १०, २०७९ समय: २२:५७:२१
धरान / हास्य कलाकार शिवहरि पौड्याल (मुखा हान्नु जस्तो) र किरण केसी (राता मकै) चलचित्र ‘लक्का जवान’ को प्रचारका लागि पूर्व क्षेत्रमा आएका छन्। शिवहरि पौड्याल द्वारा निर्माण तथा निर्देशन गरेको चलचित्र ‘लक्का जवान’ को प्रचारका लागी उनीहरु शुक्रबार विराटनगरको एयरपोटबाट लक्का जवानको ब्यानर सहितको र्यालीमा इटहरी आएका हुन्। उनीहरु पूर्वको इटहरी,तरहरा, धरान, दमक झापा विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम तथा पत्रकार सम्मेलन गरी फिल्मको प्रचार प्रसारमा लागेका हुन्। दुई दिन यता उनीहरु पूर्व क्षेत्रमा नै रहेका छन् भने किरण केसीका अनुसार लक्का जवानको टिम आज बेलुका काठमाण्डौँ लाग्ने छ ।
निर्देशक शिवहरिका अनुसार ‘लक्का जवान’ २ करोड ४५ लाखको खर्चमा निमार्ण भएको हो । इटहरीको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय चुनाव सँग फिल्म हेर्ने दिनहरु जुधछन् लगानी मंहगो छ ? लगानी उठ्छ त ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पत्रकारको प्रश्नमा उत्तर दिदै निर्देशक शिवहरिले भने लगातार ३÷ ४ दिन पानी झरी भएकाले होटल खर्च र यातायात खर्च व्यवस्थापन गर्दा फिल्म सोचे भन्दा मंहगो भएको हो । फिल्म ३ वटा त गीत मात्रै छन्। एउटा गीतमा मात्र २७ लाख खर्च भएको छ । पहिला त हामीले कति नेताहरुलाई हलमा नै लगेर फिल्म देखाएका थियौ । यो पटक पनि हामी नेताहरुलाई आग्रह गछौ । राम्रो बनाएका छौ तसर्थ लगानी उठ्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन्।
‘लक्का जवान’ बैशाख २३ देखि देशभर प्रदर्शन ल्याइने ‘लक्का जवान’ टिमको भनाई छ । चुनावमा भोट पनि हाल्नु पर्छ फिल्म पनि हेर्र्नु पर्छ भन्दै उनीहरु प्रचारमा व्यस्त रहेका छन्। यस्तै, चलचित्र प्रदर्शनको मिती नसर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
आमा बङ्गलामुखी फिल्म प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा किरण केसी, अन्सुया श्रेष्ठ, शिवहरि, राज केसी, सुरेन्द्र केसी र दीपेन्द्र खनियाँको लगानी रहेको छ । वैशाख २३ गते प्रदर्शन हुने फिल्म ‘लक्का जवान’ मा सरोज खनाल, प्रियङ्का कार्की, दिलीप रायमाझी, सलोन बस्नेत, वर्षा शिवाकोटी, किरण केसी, राजाराम पौडेल, सुशील पोखरेल, सुरेन्द्र केसी, जयनन्द लामालगायतको अभिनय छ । यात्रा फरक भएपनि गन्तव्य सबैको एउटै हो भन्ने सन्देशसहितको ट्रेलर कमेडीले भरिपूर्ण छ ।चलचित्र लक्का जवान रोमान्टिक, सिरियस र आँखाभरी आँसु आउने खालको रहेको निर्देशक पौडेल बताउँछन्।
अबको १० वर्ष पछि पनि देखाउँदा फरक नपर्ने परिवारले सँगै बसेर तथा सबै उमेर समूहलाई लक्षित गरेर सबैले सबै स्थानमा हेर्न मिल्ने गरि बनाएको ‘ लक्का जवान’ फिल्म टाउको दुखेको औषधीको रुपमा लिइएको किरण विश्वस्त रहेका छन्। नेपाली फिल्ममा दिर्नेशक कलाकारहरु सबैले आफ्नो भूमिकामा सुधार्नु परेको मइले देखेको छु। फिल्म पात्रले निर्वाह गरेका भूमिकामा कमी कमजोर भएमा फेसबुक, टिकटक र सामाजिक संजाल मार्फत सुझाव दिनु पनि म आग्रह गर्छु। किरणले भने ।